BBC Learning English - Course: English Expressions - Afaan Oromoo / Unit 1 / Session 7 / Activity 1
Yooyyaa, qophii jechoota Afaan Inglizii keessaatti of ibsuuf si fayyadan English expression akkasumas haara ta’n akka bartuuf si gargaarutti baga nagana dhufte.
Har’a, Afaan Inglizii keessattii of ibsuuf kan si fayyadu ‘pull the plug’ suuqata harkisuu jedhu ni barana. Maal jechuudha jette yaada? Wal’aaltee? Tole ittifufii caqasi.
Robiifi Liin ganam’ffataniiru. Harka walfuudhanillee Rob itti tolee hinjiru. Caqasiiti rakkinichi maal akka ta’e hubadhu.
Rob maaliif dursee gara hojii dhufe? Maaltu bowwoo itti ta’e maaliif? Dhugumaa sagantaa waa’ee aartii barreessuu jecha dursee dhufe; haata’u malee sababa artii hinjaalanneef bowwoo itti ta’e? Egaa Rob sagantaa biraa maal barreessuu barbbada laata? Dhugaadha, teknooloojiidha. Waa’ee artii barreessuu dhiisee waa’ee teknooloojii barreessuu barbaade. Caqasiitii akkamiin Liin Rob gargaaruuf akka carraaqxu hubadhu.
‘Pull the plug’, jechoota lamarraa ijaarame; ‘pull’ harkisuu fi ‘the plug’ suuqata/waan suuqame jiru’. Yoo suuqata harkiste tajaajila elektikii addaan kutta, mashiniinnis ni dhaama; kanaafuu ‘pull the plug’ yeroo jennu projektii ykn hojii eegalle tokko yeroo maalaqa itti baafnu dhaabuuf yeroo barbaannuudha. Kunis akka adda citu godha. Suuqata tokko waanti harknuuf, yeroofi maalaqa waan sana irratti baafnu waan qessaseessu ta’e nutti mul’atuufi.
Fakkeenyawwan muraas akkaataa jechoota of ibsuuf itti fayyadamamu haadhaggeeffannu.
Gaariidha. Rob kan fedhiisaa waan argate fakkaata. Liin kompiitara Robirraa suuqata irraa harkisuun ykn buqqaasuun ishii waanti suuqame sun projeektii Rob hojjechuu hinfene irratti suqamuusaa mirkaneessa. Itti aansee waa’ee maalii barreessuuf deema laata? Atihoo? Projektiin ykn hojiin irratti hojjetuufi suuqata irraa harksiuu feetu jiraa? Jechoota Afaan Inglizii of ibsuuf si fayyadan English Expressions dabalataaf yeroo itti aanu walitti deebina.
Jecha kana wanta sokkeetii keessa seenu tokko ibsuuf fayyadamuu qabna.
Gaaleen suuqqata harkisuu/luqqisuu jedhu, ibsaa/elektiriksiitii waliin waan walqabatu akka hintaane yaadadhu.
Jecha kana gaalee kana waliin gidduutti fayyadamuu qabna.